Ilizarov केन्द्र कहाँ छ? इतिहास, वर्णन, अतिथि समीक्षा र फोटो
पहिलो र मात्र रूस मा तपाईं वैज्ञानिक अनुसन्धान र नयाँ उपचार प्रविधिहरू को Ilizarov केन्द्र किल्ला गरे भनेर घटनाहरूको कालक्रम स्थापित गर्न लागि सचमुच घण्टा द्वारा, traumatology र आर्थोपेडिक्स समर्पित एक संग्रहालय छ। प्रसिद्ध हाडजोर्नी क्लिनिक सबै विकास - एकै नजरमा।
प्रतीक कुरगान क्षेत्र - Restorative Traumatology र आर्थोपेडिक्स लागि रूसी वैज्ञानिक केन्द्र शिक्षाविद् जी ए Ilizarova पछि नाम। इतिहास प्रसिद्ध डाक्टर को पहिलो विचार संग आफ्नो forties मा थाले, र Gavriil Abramovich Ilizarov उहाँले नैदानिक अभ्यास मा आफ्नो प्रस्तावित विधि लागू गर्न थाले जहाँ Traumatology र आर्थोपेडिक्स, को अनुसन्धान संस्थान मा प्रयोगशाला को टाउको हुँदा, 1966 मा लागू हुन थाले।
तर अझ सही आधुनिक बेलारुस को क्षेत्रमा, Bialowieza फिर्ता गरिब यहूदी परिवार देखि मूल को कहानी, बोक्न। मात्र कि गृहयुद्ध, लाल सेना अब्रामले Elizarov, भविष्यमा सेलिब्रेटीहरू पिता को सैनिक फिर्ता भएको छ जो समाप्त भयो। र 1921 मा, म प्रारम्भिक गर्मी मा, आमाबाबुको ठूलो आनन्द र limbs हानिकारक सबै मान्छे को आनन्द, एक उत्कृष्ट डाक्टर, सर्जन, आविष्कारक Gavriil Abramovich Ilizarov जन्मिएका थिए। जन्म, त्यो आठ वर्ष स्कूल देखि, त्यसपछि चिकित्सा प्राविधिक विद्यालय स्नातक। 1939 मा, त्यो सिम्फरोपोल मा चिकित्सा स्कूल मा भर्ना र 1944 मा यो स्नातक। र त्यहाँ पछि आफ्नो नाम प्राप्त जो केन्द्र को निर्देशक, गर्न सर्जन ग्रामीण bolnichki देखि एक लामो बाटो थियो।
सैनिकहरू धेरै सयौं को अर्द्धशतकको को सुरु गर्नु अघि युद्ध गर्न सर्जन हातमा मार्फत पारित गरेको छ। उपचार नतिजा को अवस्थित विधिहरू लगभग अनुमति छैन: पहिले नै कुरगान मा रहेको, तिनीहरूले असक्षम वृद्धहरुको को स्वास्थ्य बहाल गर्ने प्रयास जहाँ अस्पताल, को zaveduya शल्य चिकित्सा विभाग, Ilizarov हड्डी क्षति को प्रभाव अवलोकन। सबै आफ्नो हृदय, सबै आफ्नो विचार संग सर्जन कठिन अवस्था बाहिर एक तरिका देख थियो।
अन्तमा, Ilizarov सुझाव splicing हड्डी र उपकरण यो विधि को कार्यान्वयन लागि प्रतिलिपि अधिकार प्रमाणपत्र द्वारा पुष्टि को आफ्नै विधि। र मिसिन निराश थिएन! उपचार को प्रभावकारिता भंग को उपचार को समय एकदम कम, असामान्य वृद्धि भएको छ। समय, को प्रयोग को व्यावहारिक अनुभव को Ilizarov fixator एकदम वृद्धि भएको छ।
Ilizarov केन्द्र अझै पनि छ जो स्थिर फिक्स हड्डी टुकडे मात्र 1950 transosseus सङ्कुचन व्याकुलता उपकरण, मा आविष्कार यो प्रयोग गर्दछ, तर पनि kostnotkannogo जो अत्यधिक जटिल रहेका जैविक प्रक्रियाहरु नियन्त्रण गर्दछ। यो केवल भंग फिक्सिंग spokes तिनीहरूलाई संलग्न धातु छल्ले हड्डी मार्फत विस्तार कि बनेको देखिन्छ। तथापि - यो सजिलो छ। छल्ले जडान छड आफ्नै मेकानिक्स, जो तपाईं प्रति दिन एक मिलिमिटर को छल्ले को अभिमुखीकरण परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ छ। त्यो, एक गतिशील सार्वभौमिक डिजाइन हड्डी सँगै बढ्न र musculoskeletal सिस्टम को एकै समयमा कार्यक्षमता पुनर्स्थापना अनुमति छ। Gavriil Abramovich सबै भागहरु र सम्मेलन एकीकृत सिस्टम बढि व्यापक प्रयोगको लागि। प्रत्येक मामलामा - - उपकरण को प्रकारको आवश्यक भागहरु को नै नम्बर माउन्ट अब Ilizarov केन्द्र उहाँले व्यक्तिगत सक्ने सुनिश्चित गर्न प्रत्येक डाक्टर तयार। घाइते, भंग र हड्डी ऊतक को जन्मजात विरूपण, पनि हाडजोर्नी cosmetology - lengthening र खुट्टा सीधा, - यो सबै कुरगान को शहर मा, रूस मा आफ्नो पीडा आउँछ जसले हाम्रो देश को कुनै पनि नागरिक, एक उपचार योग्य र पहुँचयोग्य भएको छ, मारिया Ulyanova र घर को नाम पत्ता नम्बर छ, त्यो प्रतीक्षा थियो जहाँ।
काम को पछिल्लो धेरै लामो र कठिन वर्ष को सार्वजनिक पहिचान गर्न। - उम्मेदवार को शीर्षक बिना - 1968 मा मात्र, उल्लेखनीय उपलब्धिहरू सराहना थिए, र कमाएको Ilizarov osteosynthesis chreskostnogo को विधि चिकित्सा विज्ञान को डाक्टर। उहाँले प्रस्तुत र हजारौं निको विशाल अनुभव सामान्यिकृत थियो पर्म आफ्नो थियोसिस, बचाव। हातमा को औंलाहरु, खुट्टा - एक व्यापक विश्लेषण सम्भव मात्र होइन लामो पार्नू, तर पनि हराएका limbs भाग पुनर्स्थापना गरे जो पुनर्जनन र हड्डी ऊतक को विकास मा ढाँचाको खोज, गर्न पुगे। यो एक अनुभूति थियो!
Ilizarov केन्द्र पनि आफ्नो प्रयोग को पहिलो परिणाम लगभग यसको पूर्ण परिचालन इन्टरसेक्ट पछि मेरुदण्ड समारोह बहाल गर्न पाए। traumatology वा आर्थोपेडिक्स मा - सोभियत संघ मा जहाँसुकै संसारमा मात्र भने यस्तो अध्ययन सञ्चालन छैन। छानबीन गरेको केन्द्र Ilizarov को आविष्कार को नवीनता, अद्वितीय थियो र शंका परे त्यसैले, ठीकै, हाम्रो आर्थोपेडिक्स र traumatology एक अग्रणी स्थिति लिएको छ र यो सम्म यसको ठाउँमा सिर्जना गर्ने, कारण 1987 मा CPSU को केन्द्रीय समिति र मन्त्रीहरु को सोभियत संघ परिषद कुरगान अनुसन्धान संस्थान पुनर्गठित भन्ने तथ्यलाई अब धारण Leningrad, कजान, बेलग्रेड, ऊफा, Sverdlovsk, क्रास्नोडार, क्रास्नायार्स्क, ओम्स्क, भ्लाडिभास्तोक र मास्को क्षेत्रमा शाखा संग संघ कुरगान Ilizarov केन्द्र।
प्रमुख विदेशी देशहरुमा नैदानिक अभ्यास मा Ilizarov विधि लागू गर्न थालेका छन्। विदेशी प्रेस शिक्षाविद् कुनै आर्थोपेडिक्स देखि माइकलएन्जेलो भन्दा कम भनिएको छ। प्रसिद्ध डाक्टर फ्रान्स, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इङ्गल्याण्ड, मेक्सिको, मुस्कान निमन्त्रणा प्राप्त र कठिन काम गर्न जारी छ। यसैबीच, इटालियन "Medikl प्लास्टिक" पश्चिमी युरोप, ब्राजिल र अर्जेन्टिना को सबै देशहरूमा गर्न निर्माण र एक अद्भुत मिसिन को बिक्री को लागि लाइसेन्स किनेको। को Ilizarov केन्द्र तर्फबाट कि नाम लगाएका छ, तर पहिले नै विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेको छ।
त्यहाँ, इटाली मा, Ilizarov विधि को अध्ययन लागि संघ स्थापना, र यो विधि mastering मा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पकड गर्ने निर्णय गरे। Ilizarov चुन्नु निर्देशक बेल्जियम, स्पेन, फ्रान्स, पोर्चुगल, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य धेरै देशहरूमा खोलिएका छन् जो यी पाठ्यक्रम। Ilizarov मात्र आफूलाई भन्दा बढी तीस लेक्चर, सम्मेलन, प्रशिक्षण र अपरेसन भ्रमण गर्नुभएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्दै छन् र बलियो र अब बढ्दै निरन्तर। र कति विदेशी नागरिकहरु रूसी Ilizarov वैज्ञानिक केन्द्र निको थियो - र तिनीहरूले कठिन गणना!
सम्मान र पुरस्कार GA Ilizarov पनि अधिक पायो अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय थुप्रै पुरस्कार जित्यो। लेनिन समाजवादी श्रम को प्लस हिरो सहित। लेनिन को आदेश र श्रम को लाल ब्यानर को आदेश। पदक। संग्रहालय कुरगान, अन्तरिक्ष चलचित्र मा एक ग्रहिका उहाँलाई समर्पित - लोकप्रिय विज्ञान र कला, प्रसिद्ध कलाकार, पुस्तकहरू र मासिक पत्रिका पत्रिका को चित्रहरू (एक चिकित्सा सहित - "आर्थोपेडिक्स को प्रतिभाशाली")।
तर पनि आफ्नो प्रसिद्धि को शिखर मा डाक्टर सम्भव बाँकी अगाडी हुन जारी रूपमा लामो कुरगान Ilizarov केन्द्रमा काम जारी राखे। Ilizarov - प्रतिभाशाली आविष्कारक पनि धेरै सक्रिय छन्। उहाँले जो केवल अठार विदेश पेटेंट थिए दुई सय र आठ पेटेंट र प्रतिलिपि अधिकार आविष्कार, (दस देशहरू) छ। पदक एक धेरै VDNKh आफ्नो संग्रह मा भेला भए। र शिक्षाविद् Ilizarov मात्र होइन सोभियत संघ तर पनि विज्ञान को क्युबा एकेडेमी, म्यासेडोनिया थियो। आफ्नो गतिविधि धेरै व्यापक थियो: कम्युनिस्ट पार्टी को चार कांग्रेस काम, फरक स्तर को एक सदस्य थिए। तर मुख्य overshadow छैन यस्तो काम गर्छन्। पचास-दुई उम्मेदवार र सात डक्टरेट theses सुरक्षित थियो Ilizarov को नेतृत्व अन्तर्गत उहाँले राम्रो आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई गर्व भएको हुन सक्छ। तर यसको मुख्य सिर्जना -, को पाठ्यक्रम पनि हाडजोर्नी केन्द्र हो। Ilizarov मृत्यु, तर आफ्नो कारण सधैंभरि बाँच्न हुनेछ।
विधि बारे विवरण
व्यापक अभ्यास Traumatology र आर्थोपेडिक्स हालिदिए chreskostnogo osteosynthesis परिचालन bloodless प्रविधी को व्यापक प्रणाली। limb भंग बिल्कुल कुनै पनि स्थान, साथै छोटा र तिनीहरूलाई को विरूपण उपचार, हड्डी कमजोरीहरू transplantation र बिना हटाइएका छन् झूटा जोइन्टहरूमा, सबै ब्रश विकृति, खुट्टा, ठूलो जोइन्टहरूमा। यो सिपालु आविष्कार वैज्ञानिकहरू लागि, कुरगान Ilizarov, एक चिकित्सा केन्द्र, नयाँ संग्रामहरू जीतेको गर्न टोली नेतृत्व गर्न, प्रेम यसरी आफ्नो निर्माता, को ascetic, बैज्ञानिक गर्न आदर तिर्ने भनिएको छ। र यो Ilizarov छाडेनन्, यो उत्प्रेरित गर्छ! विकसित धेरै डिजाइन उपकरणहरू र परिचालन विधिहरू, हड्डी गठन बढी र थप गहिरो भएको प्रक्रियाहरू अध्ययन। विधि यसको सार एउटै रह्यो छ, तर यसलाई सुधार भएको छ। यसलाई अब रूस को सबै क्षेत्रहरु मा, सीआईएस देशहरुमा, साथै जहाँ निश्चित लागि संसारभरिका असी आठ देशहरू, रूपमा प्रयोग भएको छ र थाहा छैन जहाँ आर्थोपेडिक्स Ilizarov केन्द्र - ब्यारो, को यूराल मा टाढा शहर।
यसबाहेक Traumatology र आर्थोपेडिक्स Ilizarov विधि अब ढाड, antiologii, ओन्कोलजी र लागू चिकित्सा को धेरै अन्य क्षेत्रहरु मा प्रयोग गरिन्छ। को Ilizarov केन्द्र "अनाथ" को जुदाई पछि पहिले नै, आफ्ना अनुयायीहरूलाई सय असी र सात मालिक र डक्टरेट theses र चालीस नौ बचाव। प्रकाशित वैज्ञानिक काम चाँडै स्वास्थ्य चिकित्सकहरु लागि प्रकाशित हजारौं को दसौं र झन्डै दुई सय मैनुअल, साथै चालीस पाँच monographs विचार गर्न सम्भव हुनेछ। को प्रतिभा निर्माता को स्मृति जीवित छ! यो पुष्टि गर्न उहाँलाई पछि नाम Ilizarov केन्द्र संग्रहालय को फोटो मात्र। आज, यो विज्ञान र प्रविधिको चिकित्सा क्लिनिक को सबै भन्दा आधुनिक उपलब्धिहरू संग सुसज्जित छ।
हरेक वर्ष, हाडजोर्नी र neuroorthopedic चरित्र pathologies संग विरामीहरु एक भन्दा बढी सय हजार लिन्छ Ilizarov केन्द्र। रेभ समीक्षा। त्यहाँ आठ बेड संग एक अस्पताल र परामर्श र निदान को जुदाई छ। यी पर्खालहरु मा काम टोलीमा साँच्चै शक्तिशाली छ - र उच्चतम कैलिबर को आधा हजार व्यवसायि, चार शिक्षाविदों, प्राध्यापकहरू, दस, तीस-चार डाक्टर र नब्बे-तीन उम्मेदवार सहित। शिशुहरू देखि वरिष्ठ गर्न - अपवाद बिना तिनीहरू सबै मदत।
स्वास्थ्य को लागि निदान सुविधाहरु र स्रोतहरू खातामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तर लिएर, मिति भन्दा उन्नत ख्याल। यहाँ सङ्केत गर्छ को एक किसिम मा विरामीहरु मदत।
को मेरुदण्ड को जटिल anomalies।
जोडहरुको र limbs को जन्मजात र प्राप्त रोगहरु।
कुनै पनि जटिलता र स्थानीयकरण, आफ्नो परिणाम को चोट।
हाडजोर्नी systemic जटिलताहरू (जस्तै, osteogenesis nemsovershennom, मधुमेह-फस्फेट), स्नायविक (जस्तै, आईसीपी), endocrine रोगहरु, भण्डारण रोगहरु (mucopolysaccharidosis), साथै सम्बन्धित pathologies।
हड्डी र जोइन्टहरूमा, गोलीचलेकोआवाज घाउ र आफ्नो नतिजा को गंभीर दर्दनाक चोटहरु।
अन्य अस्पताल मा जटिल र भारी पछि सर्जरी को जटिलताहरू।
Ilizarov वैज्ञानिक केन्द्र
osteomyelitis - अब क्लिनिक केन्द्र सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा purulent osteology उपचार अनुभव को चालीस वर्ष छ। यहाँ endoproteziruyut र ठूलो र सानो जोइन्टहरूमा, prosthetic limbs reendoproteziruyut र बिरामीको सबै विभाग orteziruyut गुमाए। यहाँ, सबै भन्दा राम्रो रूस र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र द्वारा पुष्टि जो यो प्रोफाइल, को लागि स्वास्थ्य हेरविचार को दुनिया मा। एउटा अनुकूल वातावरण लागि प्रतीक्षा विरामीहरु, सीमित आन्दोलन क्षमता संग बच्चाहरु र मान्छे सधैं माथि क्लिनिक जनसंख्या को सबै भन्दा ठूलो प्रतिशत बनाउन। डर र दुखाइ कम गर्दै छन्, तर साझेदारी अधिकतम।
आर्थोपेडिक्स र Traumatology विभाग मा सालाना विदेशी र रूसी डाक्टर लागि पाठ्यक्रम भेला हुन्छन्। शिक्षाविद् Ilizarov वैज्ञानिक केन्द्र यहाँ व्यर्थमा हरेक वर्ष थप र थप अद्वितीय वैज्ञानिक आविष्कारहरू छैन, यसको ठीक परम्परा जारी छ। अब आधुनिक आर्थोपेडिक्स को सिद्धान्त को प्रमुख के हो?
रिकभरी एक, सुरक्षित सहज र अनुकूल वातावरण मा कर्मचारी र बिरामीको अन्तरक्रिया एक प्रक्रिया हुनुपर्छ।
अनिवार्य दायित्व को मामला मा अरूलाई प्रेरित गर्ने क्षमता: नेतृत्व व्यक्तित्व केवल केन्द्र को सफलता को खातिर हुन सक्छ। नेतृत्व रैंक र स्थिति आधारित कहिल्यै छ।
कुनै पनि कर्मचारी को केन्द्र आफ्नो कार्यहरू केन्द्र को प्रतिष्ठा निर्भर बुझ्छ। कार्यहरू केन्द्र को अनुपात देखि गठन गर्दै हुनुहुन्छ।
बलियो टोली - स्थिरता। यो प्रतिभा र प्रत्येक कर्मचारी को मेहनत र सकारात्मक तरिकामा सबै को सहयोग।
सबै हालतमा अगाडी - विचार। को Ilizarov केन्द्र को प्रतिभा आधारित छ, यो पहिचान गुमाउनु गर्न सक्दैन।
अनुभव साझेदारी छैन - अनैतिक छ!
भविष्यको लागि वर्तमान र योजना सुधार गर्न, विगतमा आदर गर्छन्।
एक चिकित्सा उपकरण - Ilizarovskim उपचार वास्तवमा आविष्कार नाम। तर केवल यसलाई बिरामीको रिकभरी मा समावेश छ। जीवन, आराम र खानपान को आफ्नो परम्परागत तरिका लागि सुलभ वातावरण - रिकभरी कुनै कम महत्त्वपूर्ण। को Ilizarov केन्द्र सधैं यी घटक ठूलो ध्यान संग उपचार गरिएको छ। त्यहाँ मांसपेशीमा toned राख्ने क्रममा नियमित शारीरिक उपचार सत्र छन्। उपचार गर्न एकीकृत दृष्टिकोण भने, रोग दूर चाँडै जटिलताहरू बिना जान्छ, र रोगी धेरै सामान्य जीवन फर्कन सक्षम छ।
हाडजोर्नी क्लिनिक अवशेषहरूको त्यहाँ साँच्चै भण्डारण छन्। Traumatology र आर्थोपेडिक्स को रूसी वैज्ञानिक केन्द्र जी ए Ilizarova अद्यावधिक र chronologically प्रसिद्ध क्लिनिक को उद्भव र विकास पहिल्याउन अनुमतिको प्रदर्शन भरिएको पछि नाम मा संग्रहालय को हल। कसले प्रस्तुत आधुनिक प्राविधिक नवाचारै छन्। संग्रहालय भ्रमण मात्र आर्थोपेडिक्स र Traumatology को विरासत परिचित छ, तर पनि अनुभव छ कि सर्जन सञ्चालन तालिका छन् सबै अनुभव गर्न अनुमति दिन्छ। जो कोहीले हड्डी fixation संरचना आत्म-इकट्ठा वा वास्तविक ड्रिल सर्जन, साथै अन्य कुनै पनि आघात उपकरण पकड गर्न सक्छन्। मनोरञ्जन, शिक्षा, शिक्षा: यहाँ घोडे मा धेरै कार्यहरु शामिल।
विशेष रोचक मल्टिमिडिया कार्यक्रम। कम्प्युटरमा आगन्तुक प्रयोग कुनै पनि माइक्रोस्कोप बिना क्षमता छ वा anatomical एटलस मानव शरीर को स्तरित संरचना आनन्द। त्यहाँ सञ्चालन प्रदर्शनी। क्यामेरा यो अपरेटिङ स्थापित छन् रूपमा, वास्तविक-समयमा - तपाईं ठूलो स्क्रिनमा सञ्चालनको प्रगति हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले सचमुच 1983rd गर्न 1972 देखि बस्ने Ilizarov कार्यालय,: संग्रहालय कोठा को धेरै छ, र ती सबै रोचक छन्। यहाँ, यो त थियो सबै छ: तालिका, कुर्सी, पुस्तकहरू, यन्त्रको डिजाइन, पर्खालहरु ... र शानदार वैज्ञानिक, आविष्कारक, डाक्टर को अत्यावश्यक आत्मा मा पोट्रेट। यसलाई जीवित को स्मृति, आफ्नो मामला मा रहेको छ किनभने!
को आणविक रिएक्टर के हो
विनाश - यो के हो
बालुवा को घनत्व
आधारभूत मिश्रित ग्रंथि secretion
"काला बक्स" मोडेल: ब्लक रेखाचित्र
AirPrint: के यो छ र यो कसरी काम गर्दछ
अवलोकन ZANUSSI ZWY 180 वाशिंग मिसिन
पशु-आकर्षित वाहन - पछिल्लो एक relic?
टेलिभिजन - यो ... हो टेलिभिजन कस्ता प्रकारका?
Vasily Zvyagintsev: लेखकको पुस्तकहरू सूची
ट्रपिकल सुन्दर abutilon, मेपल कोठा
Protasovskaya आहार: एक स्लिम आंकडा गर्न एक कदम
औषधि "loratadine": प्रयोगको लागि निर्देशन र विवरण
ए से Z सम्म कर्मचारियों को रेकर्ड प्रबंधन को रखरखाव
सुशील छोटो गर्मी कपडे
भौतिक Vud रबर्ट र आफ्नो प्रयोग
मङ्गलबार एक कुकुर राम्रो तरिकाले भन्दा खराब छ। नस्लको वर्णन र प्रकृति